Mareykanka Oo La Saftay Shirkada DP WORLD Jabuuti Ku Amrey In Dib Loo Soo Celiyo DP WORLD | Afrikada
Mareykanka Oo La Saftay Shirkada DP WORLD Jabuuti Ku Amrey In Dib Loo Soo Celiyo DP WORLD
Afrikada, Dooraale: Dowladda Mareykanka ayaa taageertay shirkadda DP World kadib khilaaf xooggan oo soo noqnoqday oo muddooyinkan ku kala dhex galay shirkadaasi iyo dowladda Jabuuti.
Mareykanka ayaa codsaday in shirkadda DP World ay dib u soo noqoto ama loo soo celiyo dekadda Jabuuti, tani oo muujineysa in Mareykanku si hoose u taageerayo wadanka Imaaraadka Carabta siyaasadiisa joogintaanka mandiqadda.
Jabuuti ayaa dooneysa in maadaama ay leedahay 88% Samiga dekadaasi ay maamulka iyadu la wareegto, halka DP World ay leedahay 44 boqolkiiba oo ay iyadu wada qabsatay maamulka dekadaasi.
DP world ayaa dekadda Jabuuti la wareegtay 2006-dii iyada oo dadka loo aaneynayo in ay ka shaqeeyeen wareejintani uu ugu weyn yahay maal-qabeenka reer Jabuuti ee Cabdiraxmaan Booreh, kaasi oo ay aad isugu dhowaayeen madaxweyne Geelle, ka hor intii aanay isku dhicin.
Dekadda Dooraale ayaa ka mid ah 65-ta dekadood ee ugu waaweyn caalamka, waxaana ay ugu balaaran tahay Bariga Afrika. DP-World ayaa ganacsadaha la saxiixatay 30 sano. Waxaana shirkaddu ay ku doodeysaa in ay iyadu saxan tahay oo ay 30 sano sii heyso dekaddani.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa si aad ah ugu qanacsanaa heynta dekadda ee DP World horumarineysay hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ayaa bilowday kadib markii Imaaraadka Carabtu uu siyaasadeeyay joogitaankiisa wadammada Afrika.
Waxaana Imaaraadku uu bilaabay in uu wax u dhimo heshiisyadii hore isaga oo isbalaarin bilaabay soona fara geliyay dekadaha Geeska Afrika isaga oo rabey in uu dego xerada Haramous oo ay degan yihiin ciidammada caalamiga ah, sidoo kale dekadda Berbera ayaa Imaaraadku gacanta ku dhigay, Muranka markii ugu horeysayba waxa uu ka bilowday sharci u heysashada DP-World in ay sii heysato qeybta kunteenarada ee (Doraleh Container Terminal), qeybtaasi oo lagu keydiyo konteenarada ugu badan qaaradda Afrika.
Taariikhda Isku dhicitaanka Iyo Dib u heshiinta:
Bishii May On May 4, 2015-kii Isu tagga Imaaraadka Carabta iyo Jabuuti ayaa si rasmi ah xiriirkoodua diblumaasi u kala jaray, waxaana Djabuuti ay saraakiisha ciidanka Sacuudiga iyo Imaaraadka ka saartay kaam-ka milleteri ee degaanka Haramous oo ku dhow kaam-ka millateri ee Lemonnier oo ah xero ay deganaan jireen milleteriga Faransiiska balse muddo kadib fadhi u noqotay ciidammada Mareykanka taliskooda Afrika waxaana halkaasi ku wehliya ciidammada isku dhafka ah ee wadammada Afrikaanka.) Waxaa sidoo kale fadhi ay u aheyd ciidammada huwanta ee Khaliijka Carabta kuwaasi oo bishii Abriil saldhig halkaasi uga dhigtay in ay Yemen weeraraan.
READ MORE: DHAGEYSO: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Caalamka iyo Soomaaliya 21/08/2018
Laakiin Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa hor boodayey ciidammada saldhigyadaasi Jabuuti fadhiyey, balse waxa ay mar walba isku dayayeen in ay ciidamo kale u daabulaan wadanka Eritrea. Intaa markii ay Jabuuti fahantay ayaa tani waxa ay ka hortimid heshiisyadii qaarkood waxaana dowladda Jabuuti ay banaanka u saartay taliskii ciidankaasi.
Isla maalintaasi Jabuuti dibadda isaga saartay ciidankaasi waxa ay aheyd Abriil 29-keedi waxaana dhacday in Boqorka Sacuudiga uu kulan la qaatay madaxweynaha Eritrea Isaias Afewerki. Boqor Salman bin Abdel Aziz waxa uu kulanka ku soo afjaray in Eritrea uu siiyey qandaraas iskaashi dhinacyada amniga iyo milletareiga ah, tani oo u gogol xaartay in Eritrea ay noqoto saldhig ciidan oo cusub oo ay huwanta Sacuudiga iyo Imaaraadku fariistaan.
Wefdi aad u heer sareeya ayaa la isweydaarsaday si looga doodo saldhigyada ciidanka iyo deganaanshiyaha huwanta isbaheysiga Carabta ee gudaha Eritrea, iyo qaabka howlgalladu u dhacayaan.
Dhismihii Casab, Eritrea:
Heshiiska Imaaraadka iyo Eritrea waxaa ku jira in 30 sano ay maamulan doonto dekadda “Casab’ oo loo adeegsan doono dhanka ciiidammada, sidaasi si la mid ahna ciidammadu adeegsan doonaan gegida diyaaradaha Casab taasi oo wadada diyaaraduhu ku ordaan ay dhererkeedu tahay 3,500 oo mitir awoodna u leh in ay qaabisho xajmi culus oo diyaaradeed. Diyaaradaha gegida Casab ee Eritrea markiiba ka soo degay waxaa ka mid ah diyaaradda culus ee C-17 Globemaster oo ay leeyihiin ciidammada Imaaraadku.
Wadammada Khaliijku waxaa ay aqbaleen in ay bixiyaan maalka ku kici kara qaadashada dekadda iyo gegida diyaaradaha wadanka Eritrea ugu weyn. Garoonka Asmara International Airport, ayaa ay u balan qaadeen in ay dib u dhisi doonaan, isla markaasina ay wadanka Eritrea u kordhin doonaan shidaalka ay siiyaan.
READ MORE: DAAWO MUUQAAL CUSUB: Madaafiicda Oo hoos la isugu dhigayo+Iyo Rasaasta Oo dhaceysa TUKARAQ
Markiiba howlgal sanadeedku dekadda ‘Casab’ waa uu ka bilowday waxaana si tayo leh loo hirgeliyay goobo badan oo loo diyaariyay in ay ka kacaan diyaaradaha weeraraya magaalada Cadan ee wadankaasi Yemen. Bishi Abriil 13-keedii diyaaradaha ciidammada dalaayadaha ku booda hawada ka soo daadiya ee CH-47 Chinook. Waxaana Huwantu hirgelisay nidaamkii Xuutiyiinta looga xoreeyay keydadka shidaalka ee magaalada Cadan ‘Joint Terminal Attack Controllers (JTACs)’ iyadoo Tani waxa ay sababtay in ciidammada daacadda u ah madaxweyne Cabdu Mansuur Hadi iyo dadweyne badan oo reer Yemen ahi ay si adag u la diriraan Xuutiyiinta. Ciidammada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa maraakiibtooda ciidammada xambaara waxa ay ciidamo ku daadiyeen goobaha difaaca bishii May ee 2015-kii.
Soo degista ciidammada badda ee Carabtu waxa ay nooleysay dekadii Casab, waxaana ciidammada Huwanta saldhig dhanka cirka ah ay ku yeesheen magaalada Cadan bishii Agoosto 2015-kii, iyaga oo bilaabay howlgalkii ‘Operation Golden Arrow’.
Diyaaradaha U.A.E. Air Force C-17s iyo C-130s ayaa saldhigyo ka sameystay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee ‘Asmara International Airport’ ee xarunta wadanka Eritrea.
Qabsashada Imaaraadku qabsadeen kanaal Suweys ‘Suez’ iridka Baabul-Mandab ‘Bab el-Mandab’ waxaa ay xulufada Sacuudigu ku tilmaameen in ay tahay mid ay dhabarka uga jebinayaan kooxaha AQAP ee Al-Qaacidada dhulaka Carabta iyo argagixisada.
Ku Noqoshadii Sacuudiga ee Jabuuti:
Sacuudiga ciidammadiisu waxa ay ku laabteen madaxweyne Cumar Geelle iyaga oo la heshiiyay waxaana ay dib u degeen saldhigii laga ceyriyay ee ‘Camp Lemonier’ bishii Okboobar 2015-kii waxaana ay ciidammadeed iyo qalabkeeda si toos ah u dhigatay bishii Maarso sanadkii 2015-kii,Waxaana Sacuudigu Jabuuti siiyey maraakiib, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo gawaarida caafimaadka iyo hub fara badan. Bishii Maarso 2016, wadahadalladu waa ay u socdeen Riyaad iyo Djibouti. iyaga oo kala saxiixday heshiis labo geesood ah oo uu ka mid yahay in Jabuuti ay Sacuudiga u celiso saldhigii milleteri ee beri samaad halkaasi ugu yaalley ciidammada Boqortooyada Sacuudiga.
Imaaraadku waxaa uu isku sii balaariyey Geeska Afrika:
Imaaraadka Carabtu markii uu Casab kireystay ma uusan hakanin waxaana uu ciidammadiisa ku sii daadiyey gobolka Geeska Bariga Afrika iyo Badweynta Hindiya. Abuu Dhabi muddo badan ayaa ay halkaasi maalgashi ku heysay waxaana ay maal badan dhigatay wadamada jasiiradaha ah ee ku teedsan badweynta Hindiya soo ay ka mid yihiin Seychelles, Maldives, Mauritius, Madagascar, iyo jasiiradaha Comoros. Halkaani waxaa Imaaraadka Carbeed uu ka furtay bankiyo iyo mu’asasooyin isaga oo dowladaha halkaasi ka jira ka taageeray dhanka dalxiiska, maalgashina ku sameystay dekadaha bixiyeyna mashaariic bani’aadanimo.
READ MORE: Madaxweynaha Hir-Shabeelle Oo Shir Guddoomiyay Kulanka Golaha Wasiirada DAAWO SAWIRADA
Imaaraadka Carbeed oo danihiisa eeganaya waxa uu Bariga Afrika ka rabey gaaska dabiiciga ah isla markaasina waxa uu uga baahnaa xiriir dhanka cuntada ah isaga oo siyaasadiisa badweynta Hindiya iyo Bariga Afrika ay ku dhismeyn in uu wada shaqeyn dhanka ammaanka ah ka helo maamullada ka jira gobolkani. Waxa uu diiradda saarayey la dagaalanka wax uu ku tilmaamay in aysan sii badanin kooxaha argagaxa ka wada gobolka.
Soomaaliya waxa ay aheyd meel diiradda saaran, horaantii bishii maajo 2015-tii ayaa uu UAE waxaana ay Imaaraadka Carabtu ay balaariyeen ciidankooda Soomaaliya ka fadhiyey sanadkaasi kor ku xusan isaga oo balaariyey bah-wadaag uu la sameystay dowladdii federaalka ee xilligaasi jirtey ee uu madaxweynaha ka ahaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Imaaraadka ayaa qalab siiyey waqtigaas ciidanka la dagaalanka argagixisada ee ay maamushay hey’adda qaranka Soomaaliyeed ee (NISA),
Imaaraadka ayaa sidoo kale maamul goboleedyada hub casri ah u qeybiyay isaga oo xiriir xididaysatay la sameystay gobollada ugu horumarsan sida Puntland iyo Jubaland.